PressReader - Isolezwe: 2017-09-15 - IKia Rio izoshubisa umbango
IKia Rio izoshubisa umbango
izinto ezitholakala kwiRio. Inamarimu angu-17 inch.
Ngaphakathi ishaya ngeinfotainment system entsha engu-7 inch touch screen. Ngezansi ayinalo uxhaxha lwamabhathini lokhu okuyenza ibukeke kahle. Idlala i-USB/AUX futhi ikwaziukuxhuma iselula ngeBluetooth. Ine-Apple CarPlay ne-Android Auto uma uxhuma iselula.
Inamabhathini esiteringini uma ufuna ukunyusa umsindo, ukubheka ukuthi uphethroli wakho ungahamba ibanga elingakanani nokunye.
Izihlalo zimnyama futhi ziyisikhumba. Inamawindi kagesi, izibuko zihlelwa ngogesi, amalambu ayazikhanyisa uma kumnyama, ama-wiper ayazishaya uma lina, ineRear Park Assist enekhamera ngemuva futhi ine-sunroof. Ngaphakathi bathi bazame ukunciphisa umsindo wangaphandle nowenjini okuyinto engiyiqaphelile ngoba ithule.
Iphuma nenjini engu1.4 litre MPI (multipoint injection) kaphethroli. Ikhiqiza amandla angu74 kW netorque ka-135 Nm. Idonsa ngamasondo angaphambili futhi inamagiya ayisithupha ashintshwayo.
Emgwaqweni ihamba kamnandi futhi nakuphethroli ayiphuzi kakhulu njengoba ibiphuza amalitha alinganiselwa kwayisikhombisa.
Kwezokuphepha iphuma nama-airbag omshayeli nabagibeli ne-Antilock Braking System. Isizukulwane sesithathu safike saba yinyama kubathengi futhi nale entsha angingabazi ukuthi izoqhubeka nokwenza kahle ngoba iyimoto esezingeni. Inani
Rio 1.4 TEC Manual R274,995
Iphuma ne-warranty yeminyaka emihlanu, iRoadside Assistance yeminyaka emihlanu ne-service plan yeminyaka emine noma ibanga lika-60 000km